Home » Lahatsoratra farany farany » People » Tale jeneraly vaovao dia manampy eo amin'ny Vail Resorts
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao lafo vidy • Vaovao • People • fanorenana • Resorts • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Kirsten Lynch no notendrena ho tale jeneraly vehivavy voalohany ao amin'ny Vail Resorts
Nanatevin-daharana an'i Vail Resorts i Lynch tamin'ny taona 2011 ho talen'ny marketing marketing ary nitana andraikitra ambony teo amin'ny PepsiCo sy Kraft Foods.
Kirsten Lynch, Lehiben'ny Marketing Marketing amin'izao fotoana izao, no notendrena ho vehivavy CEO voalohany ary mpikambana ao amin'ny Birao ao amin'ny Vail Resorts
Rob Katz, izay tompon'andraikitra mpanatanteraka ao amin'ny orinasa amin'izao fotoana izao, dia hotendrena ho filoha mpanatanteraka ao amin'ny birao.
Rob Katz dia hijanona ho mavitrika tanteraka ary handray anjara amin'ny fanapahan-kevitra stratejika sy laharam-pahamehana ataon'ny Vail Resorts.
Ryan Bennett, filoha lefitry ny marketing amin'izao fotoana izao, dia hotendrena ho tompon'andraikitra amin'ny marketing amin'ny Vail Resorts.
Vail Resorts, Inc. androany dia nanambara fa i Kirsten Lynch, izay tompon'andraikitra ambony amin'ny varotra an'ny orinasa, dia hotendrena ho mpanatanteraka manampahefana ary voafidy ho filankevi-pitantanan'ny orinasa manomboka ny 1 Novambra 2021.
Amin'izany fotoana izany, Rob Katz, izay tompon'andraikitra ambony amin'ny orinasa ankehitriny, dia hotendrena ho filoha mpanatanteraka ao amin'ny birao ary hijanona ho mavitrika tanteraka ary handray anjara amin'ny fanapahan-kevitra stratejika sy laharam-pahamehana ataon'ny Vail Resorts. Ho fanampin'izany, amin'izany fotoana izany, i Ryan Bennett, filoha lefitry ny marketing ankehitriny, manangona vola miditra, dia hotendrena ho tompon'andraikitra amin'ny marketing amin'ny Vail Resorts.
Nanatevin-daharana i Lynch Vail Resorts tamin'ny 2011 tamin'ny naha talen'ny marketing marketing azy ary teo aloha dia nitana andraikitra ambony ho mpitarika PepsiCo ary Kraft Foods. Lynch dia mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanan'ny Stitch Fix, Inc., ary tamin'ny taona 2019, dia voatendry ho ao amin'ny lisitra CMO Forbes 'ho an'ny Forbes izy, ekena ho iray amin'ireo mpitarika marketing 50 manovaova lalao. Lynch dia nihalehibe tany Chicago, nanao ski tamin'ny voalohany tamin'ny faha-enina taonany, Wilmot Mountain an'i Vail Resorts. Mipetraka any Boulder, Colorado izy izao miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany roa.
"Nandritra ny 10 taona niarahany tamin'ny orinasa, Kirsten dia tompon'andraikitra tamin'ny fanovana sy fahombiazan'ny ezaka varotra nomen'ny data Vail Resorts ary mpamily voalohany amin'ny fitomboan'ny orinasa, ny fitoniana ary ny famoronana lanja," hoy i Katz. “Ho fanampin'ny fananana haingananainganana amin'ny asa aman-draharaha tsy mampino, Kirsten dia iray amin'ireo mpitarika mazoto indrindra, voatosika niara-niasa tamiko. Ny hafanam-po lehibe ho an'ny faharetan'ny fanatanjahantena maharitra sy ny fanoloran-tena avo lenta amin'ny fampandrosoana ny mpitarika ao amin'ny orinasanay dia hahatonga azy ho mpitarika miavaka amin'ny Vail Resorts. Kirsten koa dia hodidinin'ny ekipa mpanatanteraka matanjaka sy maharitra. ”
"Voninahitra lehibe ny mitarika ny Vail Resorts amin'ny maha CEO azy ary manangana ny lova navelan'i Rob ny famerenana an-tsary ny zava-niainana an-tendrombohitra," hoy i Lynch. “Mafana fo amin'ity orinasa ity aho, ny kolontsaina mpitarika natsangantsika ary ireo mpiasanay 55,000 izay manao ny Vail Resorts ho mpitarika ny indostria. Manantena aho fa faly aho amin'ny fotoana mahomby amin'ny fitomboana ho an'ny Vail Resorts ary manolo-tena hanao izay hahatonga ny fanatanjahantena sy ny orinasanay ho maro karazana, tafiditra ary azo idirana. Hiara-hampitombo ny orinasantsika isika, hanavao ary hanohy hiasa amin'ny iraka ataontsika amin'ny famoronana traikefa iray mandritra ny androm-piainana ho an'ireo vahininay sy mpiasa. "